Meizu M5, nyocha na uche | Gam akporosis
Enwere ndị nrụpụta dịka Meizu na ha na-achịkwa inweta akara n’ahịa dị ka nke telephony site n’ichepụta ekwentị zuru oke na ọnụ ahịa mkpọmkpọ ebe.
Anyị anwaleworị ụfọdụ azịza ha, dịka Meizu M3 Rịba ama, ugbu a, oge nke Meizu M5, ntinye ntinye nke ị nwere ike ịchọta euro 150 na Amazon.
2 Nka na ụzụ e ji mara Meizu M5
4 Osisi foto nke ejiri Meizu M5
Tupu ịmalite ikwu banyere imewe, Achọrọ m ime ka otu ihe doo anya: na Meizu M5 yiri nnọọ ka iPhone 5c. Nke ahụ dị njọ? Ọ bụghị ma ọlị, M na-ahụ ya dị ka a gbakwunyere maka ndị ahụ na-achọ onye ọzọ na Apple ngwọta.
Ndị na-emepụta China ahọrọla a kpochapụwo imewe maka n'ihu, nwere otu bọtịnụ n'okpuru ihuenyo nke nwere ihe mmetụta mkpịsị aka mkpịsị aka na nke ahụ na-ejekwa iji ịnyagharịa interface na iji mmegharị ahụ.
N'ihe banyere ihe, o yiri ka M5 enweghị iko ọ bụla na-echebe ya, mana ihe m nwere ike ọ dịkarịa ala kwadoro ya 2.5D mechie ọnụ iji rịọ arịrịọ a na-apụghị ịgbagha agbagha na ngwaọrụ ma melite mmetụ ahụ.
Kwuo ekwentị ọ dị ezigbo mma ma dị mfeIji nwere a 5.2-anụ ọhịa ahụ na ihuenyo, ọ bụ a pụtara gh njikwa, na ya 138 grams nke ịdị arọ na-eme ka Meizu M5 ịda nke ọma na aka.
Akụkụ bọtịnụ na-enye ezigbo njem, a na-eji akụkụ dị n'ihu eme ihe dị ka ọkwa ntinye na n'ozuzu na-agbaso ihe a na-atụ anya na ekwentị anaghị eru euro 150.
Nka na ụzụ e ji mara Meizu M5
Usoro njikwa Android 6.0 n'okpuru omenala Flyme njirimara interface
Ihuenyo 5.2 "IPS na mkpebi HD
Nhazi MediaTek MT6750
GPU Ogwe aka Mali T860
RAM 2GB nke Ram
Nchekwa n'ime 16 GB nwere ike ịgbasa site na oghere ebe nchekwa
Igwefoto na-aga n'ihu 13 mpx mmetụta na ikanam Flash
Igwe n'ihu 5 Mpx mmetụta
Njikọ 4 ọgbọ na-esote LTE - 2 × 2 Wi-Fi MIMO (mpi 2) maka mkpuchi ikuku dị elu - Bluetooth - GPS na aGPS - OTG - Micro USB port
Batrị 3070 mAh
Akụkụ 147.2 x 72.8 x 8 mm
Ibu ibu 138 grams
Ahịa 150 euro na Amazon
Teknụzụ anyị na-eche ihu ekwentị ntinye. Achọghị ọzọ. Nhazi gị ọ ga-ekwe ka egwuregwu na-akpụ akpụ ma ọ bụ ngwa ndị anaghị achọ nnukwu ego Ma ọ bụrụ na anyị wụnye a pụtara mbepụ egwuregwu, ekwentị ga-enwe ike ịkwaga ya, ma ọ bụghị nnọọ fluidly. Ka anyị cheta na ọnụahịa a ga-arụ ọrụ zuru oke iji gboo mkpa nke onye ọrụ ọ bụla chọrọ ka smartphone gaa na ịntanetị, netwọkụ mmekọrịta yana nye ya ezigbo ojiji.
Gosipụta ike ya 3.070 mAh batrị. Na ule ndị m nọ na-eme n'oge m nwalere ọnụ ahịa a enwere m ike ikwenye na n'enweghị obi abụọ ọ bụla na ngalaba a bụ ihe kachasị mma nke Meizu M5 a.
Ekwentị ejirila ụbọchị abụọ mgbe m jiri ya nke ọma na ụbọchị ndị ahụ nke m chọrọ ịpịpụta ihe kachasị na M5, n'ime ohere ya, abịarutela m na-enweghị nsogbu ụbọchị na ọkara. N'ezie, enweghi akara nke ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa, ọ bụ ezie na iji ikike dị otú ahụ dị mma, ọ baghị uru ichegbu onwe gị banyere akụkụ ahụ.
Meizu achọghị ka ọnụahịa ahụ bilie nke ukwuu na M5 ọhụrụ ya, yabụ na ngalaba ụfọdụ ọ bụ oge iwepu mkpa, ma otu n'ime ha bụ ihuenyo. Maka nke a, ha kpebiri ịhọrọ ogwe ihe mgbaze, nwere ezigbo mma yana nke ahụ na - eme ka ahụmịhe onye ọrụ dị mma, na - egbochi ọnụ ahịa ịpụ.
Maka nke a, onye nrụpụta ahọrọla otu panel 5.2-anụ ọhịa IPS na mkpebi HD720p, nke nwere pikselụ 282 na anụ ọhịa ọ bụla na nke ahụ nwere nkọwa dị mma na ezigbo ndị ọcha. Na mkpokọta, agba ndị ahụ dị oke mma, mana ojii ojii adịchaghị omimi na ọkachasị ihie, nke dịkarịsịrị nro m, na-agbada ahụmịhe onye ọrụ ntakịrị, ọkachasị ụbọchị anwụ na-acha.
Anyị enweghị ike ichefu ihe mkpịsị aka mkpịsị aka ya nke na-enye ezigbo arụmọrụ maka ọnụahịa nke Meizu M5 na-agagharị. A na-amatakarị akara mkpisi aka ngwa ngwa, ọ bụ ezie na m ga-ekwu na ihe karịrị otu ugboro m etinyela mkpịsị aka m ọtụtụ oge, mana ọ nweghị ihe ọ bụla karịa Ekwentị iji bido na mbara igwe gam akporo.
N'ezie, interface ya anaghị amasị m ma ọlị. Ma ọ bụ na Flyme OS abụghị gam akporo. Ọ naghị abịaru nso ahụmịhe onye ọrụ. Ọ dị mma, echiche nke iji ihe mkpịsị aka mkpịsị aka eme ihe karịa bọtịnụ capacitive masịrị m, mana eziokwu ahụ bụ na ụdịrị akwa nke ndị na-emepụta Eshia dị anya na ihe anyị ji eme ihe bụ isiokwu m na-adịchaghị mma. Kedu ihe kpatara ọhụụ na-adị ka iPhone?
Flyme nwere ihe ọma? O doro anya na ee na ozugbo ị na-eji ya na ọ bụ a pụtara zuru ezu usoro na ụfọdụ na-akpali nnọọ mmasị nkọwa. Mana ọ dị ka njedebe gam akporo. Dị mfe dị ka nke ahụ.
N'ikpeazụ, m ga-ekwu okwu banyere Meizu M5 ese foto. Iji malite, ọnụ ya nwere igwefoto n'ihu 5-megapixel, na mgbakwunye na igwefoto azụ 13-megapixel.
Mee ka nke ahụ pụta ìhè igwefoto interface nke Meizu M5 nwere ezigbo ọnụọgụ nhọrọ, gụnyere usoro ọkachamara ọkachamara dị oke mkpa nke na-enye anyị ohere iji aka anyị hazie akụkụ dị iche iche dị ka nkwụsị ọcha ma ọ bụ ịdị omimi.
Ekwentị na-eme ihe ezigbo foto, ma na-enweghị oké ofufe. N'ebe a na-enwu enwu nke ọma, anyị nwere ike iwepụ ọkụ dị mma, yana agba dị egwu ma doo anya, ọ bụ ezie na ị naghị atụ anya oke mma.
Mgbe abalị dara ma ọ bụ jiri igwefoto n'ime ụlọ ị ga-ahụ ozugbo na mkpọtụ ụjọ na-apụta nakwa na àgwà nke captruas na-agbada nke ukwuu, nke mere ka o doo anya na igwefoto Meizu M5 abụghị isi okwu ya, tere aka na ya. N'ezie, ọ ga - eme ka ị pụọ karịa otu ọsọ ọsọ.
Osisi foto nke ejiri Meizu M5
Anyị na-eche ihu ekwentị ntinye nke na-enye ụfọdụ ihe na-atọ ụtọ, ọkachasị nke ahụ otú mara mma imewe, otu enweghi ikike na sakara mkpisiaka ihe mmetụta, ihe siri ike ịchọta na ntinye ntinye.
Igwefoto abughi ihe kacha mma n'ahịa, mana ọ ga - eme ka ị pụọ n'ọtụtụ nsogbu. My ezigbo ma? Flyme, nhazi nke di iche na nke Android O yiri ka anyị na-eche ọnụ ọnụ nke na-ejighị sistemụ arụmọrụ Google.
Igwefoto na-ada ụda obere
Flyme awagharị tere aka na gam akporo
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Meizu » Meizu M5, nyocha na uche
Ya mere bụ Huawei Nova 2 na Nova 2 Plus